Omume Na-acha Uhie Na-esi na Semalt
Andrew Dyhan, ọkachamara dị elu , kwuru na SEO gbanwere n'ụzọ dị njọ ma na anyị na-azaghachi na ọganihu kachasị ọhụrụ na-eme na algorithm nke engines ọchụchọ . Dị ka akụkọ nyocha Searchstrics 2016 gosipụtara, Google nyochaa ihe ndị na-esonụ na nghazi ebe nrụọrụ weebụ dị na algorithm:
Mmetụta nke ọdịnaya banyere nzube nke onye ọrụ.
Atụmatụ na Ụdị nke Ọdịnihu nke Search Engine Optimization
Otu n'ime ihe ndị dị ịtụnanya nchọta site na nchọpụta Searchstrics 2016 bụ nnukwu ịdaba na ọrụ backlinks maka ọnọdụ ndị SERP - application hosting in portland. N'ihi na saịtị ndị chere ihu na nhụjuanya site n'aka Google, nke a bịara dị ka ozi dị egwu. Otú ọ dị, n'otu oge ahụ, nke a bụ nrụgide siri ike na ndị nwe ụlọ ebe ọ bụ na ha ga-ahapụ ọrụ ụlọ njikọ ọ bụla ojii .
Kemgbe ọtụtụ afọ, Google amalitela na-etinye obi abụọ na ikike nke ọtụtụ ụdị njikọ dịka:
Akwụkwọ ndekọ mpaghara
Akwụkwọ edemede obodo
Ndekọ akwụkwọ edemede
Ndenye blọọgụ ndị ọbịa
Ihe ọ ga - abụ na nkwụnye azụ backlink na - adabere n'ịghapụta ọdịnaya dị mma ma na - enweta njikọ azụ azụ, n'agbanyeghị na enwere ike iji ụfọdụ tụnyere saịtị spam.
Ụjọ nke mgbagwoju anya jikọtara RankBrain nakwa ọrụ ya na algorithms Google. Ndị na-esonụ bụ echiche kachasị mma banyere RankBrain anyị kwesịrị ibu ụzọ kwuo:
Ọ naghị achọpụta ọdịnaya ọdịnaya.
Ọ naghị achọ ịlele profaịlụ backlink
Ọ naghị enyocha akara-site na ọnụego gbasara ajụjụ ọchụchọ.
Mmetụta nke nsụgharị Social na ya bụ nanị.
nhọrọ nke RankBrain bụ nanị iji sụgharịa ndị ahịa ịchọ nyocha n'ụzọ dị irè. A na-ejikarị ya eme ihe iji kọwapụta ọchụchọ nke ọhụrụ nye Google
N'ụzọ dị mwute, ọ nweghị ihe ị ga - eme iji kwadebe maka RankBrain. Anyị na-eche na ikikere nke RankBrain iji ghọta asụsụ ndị mmadụ na ịkọwa ihe mgbaru ọsọ onye ahịa na-adabere na njirimara ọdịnaya na nyocha ya.
Ugbu a, enwere njikọ siri ike n'etiti isiokwu ndị eji na mkpado meta gị ma ọ bụ aha ngalaba na ịchọta ọkwa dị elu na nsonaazụ ọchụchọ Google. Ya mere, na-eburu n'uche na isiokwu dị iche iche na-egosi ụzọ ndị ọrụ na-eche, nakwa na ha na-anọchite anya ndị na-asụ asụsụ na-eji nyocha ọchụchọ. Ọ bụ ya mere ị ga - eji mepụta ọdịnaya dị otú ahụ nke dị mkpa maka ndị ọrụ 'ebumnuche.